Espaina: Meksikàna Mibilaogy Mba Hahatsiaro Ho Toy ny Any An-Tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2017 17:29 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Deutsch, Italiano, Español, বাংলা, македонски, English
(Fanamarihana: Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Mey 2010)
Maro ireo mponina avy any Amerika Latina no mifindra monina ao Espaina mba hahalasa azy ireo lavitra kokoa eo amin'ny fiainana, izay tsapan'izy ireo fa tsy ho tratrany any amin'ny fireneny. Mitambatra ho vondrona iray manokana anivon'ireo mpifindra monina avy any Amerika Latina ao Espaina ireo Meksikana. Araka ny voalazan'ilay vohikala Mexicanos en España [es] (Ireo Meksikana ao Espaina), dia 15.593 ireo Meksikana nonina tao Espaina tamin'ny 2009, izay tao Madrid no nahitàna ny vondrona lehibe indrindra, satria teo amin'ny 4.675 teo izy ireo no nonina tao an-drenivohitra. Kanefa, tombana fotsiny ihany io isa io, ary maro ireo mieritreritra fa mbola avo nohò izao ny isan'izy ireo.
Mpianatra ny ankamaroan'ireo Meksikana ao Espaina, izay miisa 4.919. Miasa ao Espaina kosa ny ambiny na tafiditra anatin'ilay antsoin'ny olona sasany hoe “fifindràmonina mavokely”, enti-milaza ireo izay raiki-pitia taminà Espaniola.
Misy vondrom-piarahamonin'ireo Meksikana mpitoraka bilaogy monina ao Espaina, izay manome fahafahana azy ireo haneho ny heviny, hifandray amin'ireo olon-tiany, sy hifandray amin'ireo Meksikana hafa mipetraka ao anatin'ny faritra misy azy.
Ao amin'ny bilaogy De Piratas y Otras Historias [es] (Ireo Piraty sy Ireo Tantara Hafa), mamaritra ny fiainany andavanandro anatinà tononkalo i Elizabeth Hernández Quijano, mpanoratra iray:
Malalaka ity bilaogy ity, izay hiresahako lohahevitra samy hafa. Manana rohy vitsivitsy mankany amin'ireo bilaogiko hafa sy ireo izay zaraiko izy ity. Firaisako amin'ny vahoakako, izay tena lavitra ahy, ny asa soratro. Tontolon-tononkalo sy angano izy ity; ahy sy an'ireo namako hafa, na koa an'ireo izay tiako fotsiny. Mazava ho azy, fizaràna finamanana ity bilaogy ity. Gazety fisindàna amin'ny tontolo mahazatra, diariko manokana.
Bilaogy iray mahaliana hafa koa ny México Lindo y Querido [es] (Meksika Soa sady Malala), izay anomezan'ny mpanoratra fomba fijery samy hafa an'ireo fomban-drazana Meksikana ankalazaina ao Espaina sy ao Meksika.
Ohatra, ny Día de Muertos na Andron'ny Maty dia fety Meksikana izay ialàna voly, ihomehezana ary ankalazàna ny tsiaro an'ireo olon-tiana efa nodimandry, miaraka amin'ny sakafo, voninkazo ary alitàra. Mitovy amin'ny fomba fankalazàny tany Meksika ihany ny fomba ankalazan'ireo Meksikana ao Barselòna io andro io, tahaka ny naseho tao anatin'ilay bilaogy:
Sary an'i Martha Ines Sanchez Navarro ary nampiasaina teo ambany fahazoan-dàlana.
Ao amin'ny bilaogy Chido Guey – Madrid [es], aseho amin'ny alàlan'ny fomba fitafy ny fanomezana endrika Meksikana. Ambara ao anatin'io bilaogy io ireo vaovao momba ny fampirantiana ao Espaina mikasika ny asa kanton'i Meksika.
Meksikana mpianatra manomana Doctorat ao Madrid i Lluvia Morales, ary mpanoratra ny My Sweet Lluvia [es] (Ry Orana Mamiko), izay itantarany ny fiainany andavanandro sy anaovany fampitahàna eo amin'ny zava-mitranga anatin'ireo firenena roa:
Aty Espaina, maro ireo ankizy misakafo aty am-pianarana ary samy manana ny mpitaiza ara-tsakafony izay miandraikitra ny fandanjalanjàna ny sakafo isanandro ny toeram-pianarana tsirairay avy. Tia labiera sy tapas ve izy ireo? Eny, fa mandanjalanja. Handray labiera roa na telo sy mofo iray voasesika tapas ireo (Espaniola), tsy handray telo litatra na mahery anatinà alina iray, ary hihinana ireo tacos sy pozole izay zakany.
Tafiditra ho isan'ireo singa lehibe eo amin'ny fiarahamonina ny bilaogy; satria manampy izy ireo amin'ny fampilazàna sy fifandraisana amin'ireo vondrona na olon-tsotra sasany, na ireo vahoaka anatinà firenena samy hafa, tahaka ny hita anatin'ity tranga iray ity. Ohatra, iray amin'ireo vondrom-piarahamonina lehibe sy ilaina indrindra ahitàna ireo Meksikana monina ao Espaina ny Mexicanos en España [es]. Ankoatra ny fanambarana ireo hetsika mifandray amin'ny kolontsaina Meksikana ao Madrid, avoakan'izy ireo ihany koa ireo tolotrasa, rohy mankany amin'ny media Meksikana tahaka ireo gazety, fandaharana amin'ny fahitalavitra, gazety boky, sns; ary manome torohevitra samy hafa momba ireo nahandro Meksikana mihitsy aza.
Amin'ny teny hafa, ohatra eo amin'ny rivopanovàna anaty aterineto niainan'ireo Meksikana ao Espaina tanatin'ny roa taona lasa ireo bilaogy ireo, satria ananan'ireo bilaogy ireo ny fahefana hampiray vahoaka, hilaza vaovao aminy, sy hahatonga azy hahatsiaro ho toy ny any an-tanindrazany, na dia kilaometatra maro dia maro aza no manasaraka azy amin'ny fireneny.